Ndeipi yakanakisa mhasuru yekuzorodza? | Kuongorora - Zvinodhaka Info | Chikunguru 2021
Kambani Nharaunda Checkout Kambani, Iyo Checkout Zvinodhaka Info Info Info, Hutano Dzidzo Nhau Info Info, Nhau Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Nharaunda, Wellness Wellness Dhinda Zvipfuwo Kambani, Nhau Nharaunda, Kambani
Kuru >> Zvinodhaka Info >> Ndeipi yakanakisa mhasuru yekuzorodza?
Ndeipi yakanakisa mhasuru yekuzorodza?
Nekudaro, iwe wakashora ako epazasi kumashure kupfura hoops, rinonetsa basa svondo rakakurudzira pane akateedzana emhirizhonga kutemwa nemusoro, arthritis iwe iwe unomuka nekuomarara uye kurwadziwa kwemutsipa. Zvino chii? Kushushikana, kurwadziwa kwemhasuru kunogona kuvhiringidza, kukanganisa, uye kukanda wrench muchirongwa chako. Kana kurwadziwa kwemhasuru kuchirova, zvinogona kuve iwe uchitsvaga yekumhanyisa-kuita zororo kuti ugone kuenderera nehupenyu. Kunyangwe iwe uchirwadziwa neshure, mhasuru, mhashu, kana kukuvara kwakanangana nekukuvara kusingagumi, zvinyoro zvinozorodza zvinopa kusununguka kwekurwadziwa nekukurumidza, zvichibvumira muviri wako kuti ushande senguva dzose Funga nezve ichi gwara gwara rako remugwagwa kune epamusoro mhasuru ekuzorodza pamusika.
Zvakaoma kuzivisa imwe tsandanyama inozorodza zvirinani pane mamwe ese nekuti mhando yega yega ine zvayakanakira uye yainoshandisa. Muzhinji, kurapwa kwekurwadziwa kunowira mune chimwe chezvikamu zvitatu: over-the-counter (OTC), mushonga, uye zvakasikwa. Kusarudza iyo yakanakisa mhasuru yekuzorora inoenderana zvachose neako chaiwo mamiriro uye marwadzo nhanho. Paunenge usina chokwadi, bvunza wako mupi wezvehutano.
Over-the-counter mishonga OTC kurwadziwa kunodzora kazhinji ndiwo mutsara wekutanga wekuzvidzivirira pakurwadziwa, kuzvimba, uye kusagadzikana. Ivo vanogona kushanda zvishamiso kune akaomesesa mamiriro senge mutsipa uye kudzika musana kurwadziwa. Kazhinji, chiremba wako anogona kutanga iwe pamushonga weOTC, uye kana izvozvo zvikasapa zororo raunoda, anogona kunyora tsamba yechimwe chinhu chepamusoro-giredhi.
Mishonga yemishonga: Kune mamwe marwadzo asingagumi uye mamiriro apo mishonga yeOTC isingazoucheke, chiremba wako anogona kunyorera chimwe chakasimba. Nekuda kwemhedzisiro yavo yakakomba, mushonga unozorodza mhasuru wakagadzirirwa kushandiswa kwenguva pfupi, mushure meizvozvo chiremba wako anozoshandukira kune mimwe mishonga kana kurapwa.
Natural mishonga Nezve kusuwa kudiki uye zviratidzo zvine chekuita nekushushikana, iko chete kurapwa kwaungade kunogona kutorwa kwakatwasuka kubva kune zvakasikwa. Usati wamhanyira kuna chiremba kunovhenekwa uye zvinogona kunyorerwa, unogona kukwanisa kurapa mushonga unoshanda-kubva kurimwa kubva kumba.
Ndeupi mushonga wepamusoro-the-counter (OTC) wekurwadziwa kwemhasuru?
Iyi ndiyo mishonga yaunogona kuwana paunenge uchishandisa zvivakwa paresitorendi yako yemuno kana muchitoro chiri nyore. Mazhinji acho mazita emumba, uye hazvishamise kuachengeta aripo, akasungirirwa mumushini kabhineti, zvingangoitika. Kunyangwe mishonga yeOTC iri nyore kuwana, vanozoita basa racho kune akawanda marwadzo nemarwadzo, uye vanachiremba vanowanzovarayira vasati vapa nzira dzakasimba dzekurapa.
pfuti yetoradol inoita sei?
OTC NSAIDS, senge ibuprofen uye naproxen, yakanaka yekutanga mutsetse mumiriri kudzora kuzvimba kwakatenderedza kukuvara, inokurudzira Joanna Lewis, Pharm.D., Mugadziri we Nhungamiro yaFarmacist . Vanogona kunge vasina simba rakafanana rezvikwata zvepamusoro-soro zvekuzorodza, asi vachiri kushanda uye vane mashoma mhedzisiro. Kana iwe ukamonera bhanhire rako kunzvimbo yekurovedza muviri kana kumuka uine kurwadziwa musana, edza imwe yeiyi usati wabvunza chiremba wako tsamba.
Zvakaipa (ibuprofen): Ichi ndicho chikafu chevabereki, vanachiremba, uye vatambi zvakafanana. Ibuprofen imwe yeanonyanyo shandiswa asiri -steroidal anti-anogumbura zvinodhaka (NSAIDs) anowanikwa. Saka nekudaro, Advil haangogadzirise kurwadziwa, asiwo kuzvimba futi. Inonyanya kushanduka. Iishandise kurapa kurwadziwa kwepashure, osteoarthritis, kurwadziwa nekuenda kumwedzi, fivha, kutemwa nemusoro, migraines, kupora, uye zvimwe kukuvara kudiki. Mashoma madhayeti anowanikwa pamusoro pekambani, asi chiremba anogona kupa mishonga yakakwira zvakare.
Motrin IB (ibuprofen): Usanyengerwe nezita rechiratidzo rakasiyana. Motrin IB uye Advil ndizvo zvakafanana zvinodhaka. Naizvozvo, ivo havafanirwe kutorwa pamwechete, nekuti zvinogona kuwedzera njodzi yekuwedzeredza.
Aleve (naproxen): Imwe mishonga yemakurukota, naproxen yakafanana neibuprofen munzira dzakawanda. Iyo zvakare iri NSAID, saka inoshanda nekudzora kuzvimba. Inobatsira pakurapa kurwadziwa kwemhasuru, kutemwa nemusoro, migraines, osteoarthritis, fever, cramp, uye kukuvara kudiki. Musiyano mukuru pakati naproxen uye ibuprofen ndiko kwavo dosing. Unogona kutora naproxen maawa masere kusvika gumi nemaviri uye ibuprofen mana kana matanhatu, saka Aleve anogara kwenguva yakati rebei.
Aspirin : Imwezve NSAID yako. Aspirin inobata yakawanda yemamiriro akafanana, kubvisa marwadzo uye kudzikisa kuzvimba. Nekudaro, madosi ezuva nezuva easpirin akaratidzirwa kushanda mukudzora njodzi yekugwamba kweropa, sitiroko, uye chirwere chemwoyo mune vamwe vanhu. Kumbira chiremba wako usati washandisa kudzivirira kudzivirirwa. Kana iwe uri mukwikwidzi, iwe ungangotora mwana aspirin, kana 81 mg, yakavharwa piritsi zuva nezuva. Mazita ezvinowanzozivikanwa anosanganisira Bayer kana Ecotrin.
Tylenol (acetaminophen): Kusiyana neNSAIDs, acetaminophen inotarisa chete pakurapa kurwadziwa-kwete kuzvimba. Iyo inoshandiswa kune tsandanyama aches, kutemwa nemusoro, migraines, musana uye kurwadziwa kwemutsipa, fivhiri, nezvimwewo. Zvisinei, kana kuzvimba uye kuzvimba kuri iko kunokonzeresa kwekutambudzika kwako, acetaminophen haizove ingangoita seinoshanda seNSAIDs seaya akanyorwa pamusoro. Acetaminophen yakawandisa mashandisiro uye mashoma mashoma mhedzisiro inoita kuti ive inonyanya kufarirwa OTC marwadzo ekudzivirira pasi rese.
RELATED: Nezve Advil | Nezve Morin IB | About Aleve | Nezve Aspirin | Nezve Tylenol
Ndeapi akanakisa ekunyorwa tsandanyama tsandanyama?
Kune dzimwe nguva apo mishonga yeku-rekita haingokwani. Kana iwe wanga uchitora acetaminophen kana ibuprofen zvinowirirana asi uchiri kubata nemarwadzo ekumusana, spasms, kana imwe nyaya, inogona kunge iri nguva yechimwe chinhu chakasimba. Muzviitiko zvakaita seizvi, vanachiremba vanogona kutarisa kunyorerwa tsandanyama tsandanyama senge inoshanda zvakanyanya, kunyangwe iri yenguva pfupi, mhinduro.
Kurwadziswa kwemhasuru kana kurwadziwa kwemutsipa kungangoda kushanyirwa nachiremba kana kumwe kuongorora kwekuyedza kuti usvike pamwoyo wenyaya, Dr. Lewis anodaro. Kune akatiwandei akanaka ekurapa mishonga senge methocarbamol, cyclobenzaprine, uye metaxalone.
Zvidzidzo zvenguva pfupi zvakaratidza izvozvo skeletal muscle relaxants (SMRs), kana antispasmodics, inopfuura anti-anogumbura madhiragi (NSAIDs), senge ibuprofen uye acetaminophen, mukudzora kurwadziwa kwakanyanya kunoenderana nemamiriro sekurwadziwa zvakanyanya musana . Paflip padivi, ivo zvakare vane zvingangove zvakakomba mhedzisiro mhedzisiro uye haifanire kushandiswa kune kwenguva refu kurwadziwa kwekutambudzika. Kunyangwe zvakadaro, iyi mishonga inonyorerwa inoshanda uye yakavimbika sarudzo dzekuzorora kwenguva pfupi:
Flexeril kana Amrix ( cyclobenzaprine ): Cyclobenzaprine inozivikanwa uye inodhura isingadhuri generic mhasuru inozorodza inowanzo shandiswa kwenguva pfupi kurapa mhasuru uye marwadzo ane chekuita nesprains, matinji, nezvimwewo. A chaiwo muyero uri 5 kusvika 10 mg panguva yekurara kwevhiki mbiri kana nhatu, kunyangwe chiremba wako achibvumidza kusvika pa30 mg zuva nezuva (inotorwa seimwe 5 kana 10 mg piritsi pese maawa masere) kana nyaya yako yakanyanyisa. Zvimwe zvinokanganisa zvinosanganisira kukotsira, kuoma muromo, dzungu, uye kuneta.
Robaxin (methocarbamol): Inowanzo shandiswa kurapa dzakakomba tsandanyama spasms, musana kurwadziwa, uye dzimwe nguva tetanasi spasms, methocarbamol inoitiswa nemuromo mumuromo inosvika 1500 mg doses kana intravenously mu 10 ml ye1000 mg. Iyi dosing inowanzo kuve yakakwira mukutanga 48 kusvika maawa 72, zvobva zvadzikira. Varwere vanogona kukotsira, kuita dzungu, kuona kwakadzikama uye-mukubaya-maitiro - maitiro panzvimbo yejekiseni. Nekudaro, kazhinji kazhinji ishoma pane yekunyaradza kupfuura mazhinji mamwe misi inozorodza.
Skelaxin (metaxalone): Kunyange ichidhura zvishoma kupfuura mamwe maSMR, senge methocarbamol, iyo yekumusoro yemetaxalone ndeyekuti inopa kushanda kumwe chete nehuremu hwakaderera hwemhedzisiro. Mune matatu kusvika mana 800 mg doses pazuva, inoshanda pane yako yepakati tsinga system (huropi uye musana) uye inogona kukonzeresa, dzungu, kutsamwa, uye kuda kusvotwa, asi metaxalone haigare zvakanyanya senge dzimwe nzira.
Soma (carisoprodol): Zvakafanana naRobaxin , Soma inowanzo shandiswa kurapa marwadzo anoenderana neacute musculoskeletal mamiriro. Carisoprodol inoshanda pane yepakati sisitimu sisitimu yekubvisa maurotransmitter anotumirwa pakati pemitsipa nehuropi. Inotarisirwa mu250-350 mg doses katatu pazuva (uye panguva yekurara) kweanosvika mavhiki matatu. Zvakajairika mhedzisiro zvinosanganisira kurara, dzungu, uye kutemwa nemusoro. Iyo zvakare yave ichibatanidzwa nekupindwa muropa, saka inofanira kushandiswa nekuchenjerera.
Valium (diazepam): Kazhinji kazhinji, iwe unonzwa nezve Valium sekurapa kwekushushikana kwekushushikana uye doro rekusiya zviratidzo, asi inogona zvakare kuve mushonga unoshanda wemhasuru yemhasuru. Diazepam ndeye benzodiazepine (saXanax) inoderedza kunzwisisika kwevamwe vanogamuchira huropi. Chipimo chinosiyana zvichienderana nemamiriro ezvinhu, asi pamabhonzo emhasuru, zvinowanzoita 2-10 mg, katatu kana kana pazuva. Nekuti inodzora kuita kwehuropi, Valium inowanzo kukonzera kuneta uye kushaya simba kwemhasuru saka, sevamwe vadzora mhasuru, haufanire kuisanganisa nedoro kana zvimwe zvinodhaka.
Lioresal (baclofen): Kusiyana nemhasuru inozorodza pamusoro payo pane iyi runyorwa, baclofen inonyanya kushandiswa kurapa kupora (kuenderera kwemhasuru kuomarara kana kuomarara) kunokonzerwa neakawanda sclerosis kana kukuvara kwemuzongoza. Iyo inopihwa sehwendefa remuromo, kana inogona kujowa mukati mega musana. Kazhinji kazhinji, baclofen inorayirwa pane imwe purogiramu inowedzera kuyerwa zvishoma nezvishoma mazuva ese matatu. Zvinogona kukonzera kurara, dzungu, kusvotwa, hypotension (low blood pressure), kutemwa nemusoro, kugwinha, uye hypotonia (isina kusimba tsandanyama toni), saka kunyangwe ichishanda pakurapa kwekunyepera, inogona kunge isiri iyo yakanyanya kunaka sarudzo yekuzorodza kurwadziwa.
Lorzone (chlorzoxazone): Iyi imwezve SMR inoshanda pane yepakati sisitimu yekurapa marwadzo uye mhasuru inosanganisirwa nemhasuru uye mapfupa mamiriro. Yakanyatso kushivirirwa kunyangwe dzimwe nguva kukotsira, dzungu, huremu hurema, uye malaise. Muzviitiko zvisingawanzoitika, zvinogona kukonzera kubuda kwemudumbu, saka vanachiremba vanowanzo sarudza mimwe mishonga. Chaicho chipimo chemushonga 250 kusvika 750 mg katatu kana kana zuva nezuva.
Dantrium (dantrolene): Kufanana nebaclofen, dantrolene inonyanya kushandiswa kurapa kusarongeka. Inoshanda kune spasms inosangana nekukuvara kwemuzongoza, sitiroko, cerebral palsy, kana multiple sclerosis, uye zvakare dzimwe nguva inoshandiswa kune yakaipa hyperthermia. Zvinowanzoitika mhedzisiro zvinosanganisira manyoka, kurara, dzungu, kuneta, uye kushaya simba kwemhasuru. Iyo yekutanga dosi ndeye 25 mg zuva nezuva uye inogona kuwedzerwa zvishoma nezvishoma kana zvichidikanwa, inosvika ku100 mg katatu zuva nezuva. Mune zvisingawanzo zviitiko zvekushandisa zvakanyanya kana kushandiswa kwenguva refu, zvave zvichinzi zvinokonzerwa nekukuvara kwechiropa.
Norflex ( orphenadrine ): Kunze kwekurapa maronda-ane chekuita nekukuvara uye spasms, orphenadrine inoshandawo mukugadzirisa kubvunda kubva kuchirwere cheParkinson. Vamwe varwere vanogona kunzwa mukanwa wakaoma pamwe nekurwadziwa kwemoyo, kusaona zvakanaka, kushaya simba, kusvotwa, kutemwa nemusoro, dzungu, kuzvimbirwa, uye kukotsira, asi kazhinji zvinongowedzerwa madheji. Nekudaro, iyi mhasuru inozorodza dzimwe nguva inokonzeresa anaphylaxis, rudzi rweakanyanya kukanganiswa nemhinduro. Nekudaro, pakurwadziwa kwekutanga kwemhasuru, vanachiremba vanowanzoenda neimwe yeimwe sarudzo pane urwu runyorwa. Standard dosing ndeye 100 mg, kaviri pazuva.
Zanaflex (tizanidine): Tizanidine inonyanya kushandiswa kurapa kuomarara uye kupaza kwakabatana neakawanda sclerosis uye cerebral palsy, yakafanana nebaclofen. Ose ari maviri anoratidza kushanda, asi tizanidine dzimwe nguva inoratidza mashoma mhedzisiro, ayo anogona kusanganisira mukanwa wakaoma, kuneta, kushaya simba, dzungu. Inoshandiswa mu 2 kana 4 mg doses.
RELATED: Amrix ruzivo | Robaxin ruzivo | Skelaxin ruzivo | Soma ruzivo | Valium ruzivo | Lioresal ruzivo | Lorzone ruzivo | Dantrium tsanangudzo s | Orphenadrine ruzivo | Zanaflex ruzivo
nzira yekuchinja tylenol uye ibuprofen yekurwadziwa
Edza kadhi reSpecialCare rekutora kadhi
Ndeipi yakanyanya musimba muswe relaxer?
Ngatitii kurwadziwa kwako kwakabatana nemararamiro. Pamwe maitiro matsva ekurovedza muviri anokuisa iwe kuburikidza neanopwanya, kana kutsvedza pamusoro palaptop yako yatanga kutora mutero wayo kumusana nemutsipa. Kuderera kusuruvara kana kurwadziwa kunoitika nguva dzese kune chero huwandu hwezvikonzero, uye vangangodaro vasina kunyanyisa kana kusingaperi zvakakwana kuti vabvumidze ma relaxation emhasuru kana mamwe marwadzo ekudzora. Nhau dzakanaka ndedzekuti kune akawanda echisikigo ekugadzirisa uye ekudya mhinduro kune yakapfava muviri marwadzo. Kunyangwe zvirinani ndezvekuti iwe unogona kuwana mazhinji ezvekurapa mune chikafu uye zvinowedzera.
Dr. Lewis anoona mimwe mishonga yemusikirwo yakanakira kudzora kushushikana kana kuwedzera mamwe marapirwo. Mafuta elavender uye chamomomile zvinhu zvikuru zvekuzorora paunenge uchigeza kana kugadzirira kurara, anodaro. Iwo haawanzo kurapwa kwekutanga-mutsara asi akakurisa pamwe chete nezvimwe zvinhu kugadzirisa kusagadzikana kubva kunetseka.
CBD oiri (cannabidiol) yakave inozivikanwa asi yakawanda-yakamisikidzwa yekuwedzera yekuwedzera. Yakaburitswa kubva kune hemp chirimwa, haina kukonzera yakakwira, asi inogona kushanda pakurapa pfari, kushushikana, uye kurwadziwa kwakawanda, pakati pezvimwe zvirwere. Vazhinji vanopika nayo nekuda kwehurefu hwenzvimbo dzemamiriro, asi kutsvagisa kuri kuenderera parizvino nezve zvimwe zvainogona kuita.
Pamusoro pezvo, Kudya neDrug Administration ( FDA ) yakabvumidza chete chigadzirwa cheCDD, Epidiolex, iyo inogona kupihwa kurapa maviri asingawanzo maitiro epfari. Zvakawanda [zvigadzirwa zveCBDD] hazvidzorwe, [saka] kushanda pakati pezvigadzirwa hakuenderane, Dr. Lewis anotsanangura.
unogona here kutora keflex ye strep huro
Kana, iwe ungangodaro wakanzwa nezve arnica gel, yakagadzirwa kubva kumiriwo yekuzvarwa kusvika pakati peEurope. Inowanzo shandiswa kurapa maronda ane chekuita nekukuvara uye kuzvimba uye arthritis. Kufanana neCDD, hapana tsvakurudzo yakawanda pamusoro payo, asi arnica yaratidza kuvimbisa semushonga wepanyama wekurwadziwa.
Kuenda nenzira yakasikwa? Aya echisimba mhasuru ekuzorodza anogona kusimudzira marwadzo-asina hupenyu uye hutano hwakakwana:
Natural Remedy Nzira Yekutungamira Zvakajairika Kurapwa
Chamomile tii Oral Kufunganya, kuzvimba, kushaya hope
CBD mafuta Oral, yemusoro Pfari, kushushikana, kurwadziwa kusingaperi
Arnica gel Misoro Osteoarthritis, mhasuru aches / kushushikana
Cayenne mhiripiri Oral, yemusoro Kutambudzika kwepamuviri, kurwadza kwemajoini, mamiriro emoyo, kurwadza
Lavender mafuta Misoro Kuzvidya mwoyo, kushaya hope, zororo kurwadziwa
Magnesium Oral Tsandanyama cramps, kugaya, kuzvimbirwa
Lemonrass Oral, yemusoro Dumbu kurwadza, chirwere chekudya, chirwere cherheumatoid arthritis
Turmeric Oral Osteoarthritis, kuzvimba, kurwadziwa mudumbu
Massage, kurapwa kwepanyama Misoro Kutambudzika kwemhasuru, kusuruvara, kushushikana, kushushikana
Kunyange runyorwa urwu rusina kukwana, inokupa iwe nezvakawanda sarudzo, zvisinei kuti chii chauri kukuvadza. Sezvenguva dzose, bvunza wako mupi wezvehutano wezano rezvehutano usati watora mushonga mutsva. Kunyangwe kurapwa kwechisikigo kunogona kukonzera kusangana kwakakomba kwezvinodhaka-zvinodhaka.
FDA inobvumidza yakawanda sclerosis kurapwa Ocrevus
Zoloft mhedzisiro: Chii chaunotarisira muvhiki yekutanga yekutora Zoloft
apple cider vhiniga yakanaka kune fungus
ndinoda kuziva rudzi rweropa rangu
inguva yakadii kuronga b inoshanda mushure
kunze-kwehomwe yakakwira tsananguro
nzira dzechisikirwo dzekurapa hutachiona hwembiriso uchiri nepamuviri